Waa maxay farshaxanka garaafka naqshadeeya Google Doodles? | Abuurista khadka tooska ah
Hal abuur lehOnline
Farshaxanee naqshadeeye Google doodles?
Pablo Gonder | | Fanaaniin, dhowr
Muxuu farshaxan garaafku naqshadeeyaa doodles de Google? Waa su'aal aan dhammaanteen waqti kale oo kale inta aan isticmaaleyno biraawsarkan aan isweydiinnay waqti ka mid ah nolosheena. Markasta oo aan dhex lugeyno Google Waxa ugu horreeya ee aan aragno waa sawir muhiim ah halka astaanta asalka ah Google con sawirro nooc kasta leh oo isbeddelaya iyadoo ku xiran hadba waxa maalintaasi u taagan tahay.
Dhamaanteen waan aragnaa kuwaas doodles maalin kasta laakiin ma naqaan cidda abuuraysa? shaqooyinkaas oo dhan ayaa ka dambeeya fannaan maxaa mala awaal cusub doodles si aad noo cajabiso markii aan soo galnay Google. Hal-abuurkii Google Ma laha xuduudo, sidoo kale farshaxankan uma muuqdo midkoodna laga soo bilaabo 2000 wuxuu abuuray madadaalo aan dhammaad lahayn iyo sawirro mala awaal ah si loo raaco astaanta Google.
Dhamaanteen waxaan waligeen galnay mashiinka raadinta Google waana ku faraxsanahay markaan aragnay sawir la socday astaanta, hab ka duwan oo lagu soo jiito isticmaalaha maxaa yeelay isku darka hal abuurka iyo macluumaadka si fiican u badan doodles de Google matalo taariikhaha muhiimka ah iyo tirooyinka.
1 Ayaa naqshadeeya Google Doodles?
2 Goorma ayey Google doodles dhashay?
3 Immisa doodood ayaa jira?
4 Maxay Google doodles wax badan u shaqeeyaan?
5 SOO DIR SHARCIYADAADA GOOGLE!
Yaa qorsheeya Doodles de Google?
Dhammaan noocyada kala duwan ee taariikhaha iyo dhacdooyinka muhiimka ah ayaa lagu muujiyey sawir ahaan adoo isku daraya astaanta Google oo leh sawirro cayn kasta ah, xitaa tan iyo markii aad dhawaan la ciyaaro iyo fiidiyowyo is-dhexgal ah. Google Shaki la'aan waa hormuudka hal-abuurnimo iyo hal-abuur, laakiin yaa ka dambeeya sawirradan cajiibka ah? shaqadan oo dhan waxaa ka dambeeya fanaanka Dennis Hwang, farshaxankan ayaa ka qayb qaadanaya bilaabay inuu abuuro kii ugu horreeyay doodles waayo, Google isagoo ku biirinaya mala-awaalkiisa mid kasta oo iyaga ka mid ah. Maanta, kobaca ay shirkaddu soo martay, shaqadan ayaa la qabtay koox sawirayaal ah loo yaqaan doodler.
Goorma ayey Google doodles dhashay?
ka doodles de Google waxay soo baxeen "ciyaaro" aasaasayaashii Google waxay bilaabeen ciyaar sanadkii 1998 oo leh astaan ​​shirkadeed kudhisan boombale ka dambeeya "o" labaad ee astaanta. Laba sano kadib 2000 waxay ka codsadeen farshaxanistaha Dennis Hwang inuu abuuro sawirro la socda astaanta. Waqtigaan doodles de Google waxaa sameeyay shaqo kooxeed halkaas oo koox dad ahi go'aansadaan dhacdooyinka matalaya garaaf ahaan. Waxa ku bilaabmay wax aad u yar oo qof keligiis abuuray ayaa noqday wax weyn oo ay wax waliba abuureen koox xirfadlayaal hal abuur leh.
Fiidiyowgaan waxaan ku arki karnaa fannaanka Dennis Hwang abuurista mid ka mid ah doodles de Google. Shaki la'aan, waa shaqo aan caadi aheyn iyo raaxo noo ah isticmaaleyaasheena si aan u aragno sida xirfadleydan naqshadeynta ah u shaqeyso.
Immisa doodles ma jiraan?
Sanado badan oo shaqo ah ka dib waa caadi in la helo nooc ka mid ah doodles laakiin Ma taqaanaa inta la abuuray tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2000 ilaa hadda? Rumayso ama ha rumaysan hadda waxaa jira wadar ah 2000 doodood, 2ooo siyaabo loo metelo dhacdooyinka muhiimka ah iyada oo la adeegsanayo sawir, runtii waa shaqo abuur abuur aan caadi ahayn.
Hadaad xamaasad leedahay doodles sawirka iyo naqshadeynta ma seegi kartid gallery gaar ah Google meesha aad ka wada arki karto doodles oo la abuuray bilowgii shirkadda illaa iyo hadda. Gallery-ku wuxuu leeyahay a mashiinka raadinta halka laga raadsado doodles si habsami leh loo maro taariikhaha ama dhacdooyinka muhiimka ah.
Markii aan gallayno galleetka oo aan gujino a feegaarka waxaan ka heli karnaa macluumaad aad u xiiso badan ku saabsan taas feegaarka la taaban karo iyo dhacdada ay mataleyso. Waa wax xiiso leh maxaa yeelay waxaan nafteena ugu wargalin karnaa wax kasta oo nooc ah isla mar ahaantaana aan ku raaxeysto aragtida shaqooyinka hal abuurka leh.
Maxay Google doodles wax badan u shaqeeyaan?
ka doodles de Google aad bay u shaqeeyaan sababtoo ah dhinac waa kuwo muuqaal ahaan soo jiidasho leh helitaanka isticmaalaha inuu ku raaxeysto aragtidiisa iyo xitaa goorma ula falgalaan isaga ciyaar yar, dhanka kale waxaan kaheleynaa qeybta wargelinta halka isticmaalaha wuxuu helaa macluumaad ku saabsan dhacdo muhiim ah.
Muuqaal soo jiidasho leh
Xog ogaal ah
Haddii annaga isticmaale ahaan aan wajaheyno a feegaarka de Google taasi waxay nooga sheekeysaa qaab jaantus ah mowduuc na xiiseynaya waa nala soo jiidan doonaa oo waxaan dooneynaa inaan wax badan ka ogaano.
en el feegaarka in aan hoos ku aragno na tusi maalinta doorashada Spain qaab aad u wanaagsan oo raaxo leh ku ciyaarida xarfaha astaanta, xaaladdan marka la eego heerka garashada (xaqiiqada) xarfaha waa hooseysaa laakiin xitaa sidaas ayaan ku dareensan nahay Google arka faahfaahinta yar yar ee xarfaha iyo midabbada shirkadaha.
Iyada oo ay imanayaan waqtiyada cusub muhiimada khibrada isticmaale iyo isdhexgalka Google Waxaan soo jeedinayaa habab cusub oo aan ku muujiyo kuwan doodles. Maanta waan heli karnaa doodles dhaqaaqin (fiidiyow) iyo waliba is dhexgal cayaaraha yar yar ee isticmaaluhu ka qaybqaato, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo saacado qaatay ku ciyaarista mid ka mid ah ciyaaraha /doodles waxaa soo jeedinaya Google.
Waxaan arki karnaa fiidiyoow yar oo qaar leh doodles animated de Google.
Go'aansaday doodles de Google waxay keeneen xanaaq noocaas ah oo qaarkood YouTubers waxay sameeyeen fiidiyowyo ciyaaro mid ka mid ah kuwan minigames Google.
SOO DIR QODOBADA A GOOGLE !
Ma ogtahay taasi waad awoodi kartaa soo dir doodles a Google? Haddii aad tahay farshaxan ama naqshadeeye waadna jeclaan lahayd ka qayb qaado soo jeedintan Google waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah dir e-mayl oo leh nashqaddaada feegaarka. Xusuusnow inaad sheegto oo aad sharaxdo feegaarka si waxa aad soo jeedisay u fahmaan. Nasiib wanaagsan!. U soo dir soo jeedintaada cinwaankan: proposals@google.com
Shaki kuma jiro Google ku calaamadeeyay kahor iyo kadib internetka labadaba heerka IT-ga, iyo waliba hal-abuurnimo iyo hal-abuur. Waa duufsan qiyaasi waxyaalaha cusub ee kadis ah maxay kuwayagu diyaariyeen Google. Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato Google ma arki kartaa tan documentary yar ku saabsan sida shaqaalaha Google.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Farshaxanee naqshadeeye Google doodles?
Qalabka midabaynta naqshadeeye kasta oo wanaagsan waa inuu lahaadaa
Sida loo abuuro saamaynta "Andy Warhol"